test automation zvishandiso zvekuyedza reactjs kunyorera
Kuru Kushandisa Michina Kwayedza Zvekushandisa Zvishandiso zveKuyedza ReactJS Zvishandiso
Ndiri kuronga kuyedza ReactJS kunyorera uye ndaida kuona kuti ndechipi chakanakisa chishandiso kunze uko mumusika kuti uite kumagumo-kumagumo bvunzo? Mushure mekuita katsvagurudzo ndakaona kuti kune akawanda maturusi anowanikwa kuyedza ReactJS kunyorera asi ndeipi yakanyanya kunaka yekushandisa kumagumo-kumagumo bvunzo?
Iko hakuna pfungwa ye 'yakanakisa chishandiso' kana zvasvika kune otomatiki kuyedza. Izvo zvese zvinoenderana nemamiriro eprojekti yako uye nezvamunoda kuwana kubva chishandiso.
Izvi zvinoreva kuti havasi ivo chete vaedze vanogona kunyora zvoga magumo bvunzo-kumagumo, asi vanogadzira vanogona zvakare kubatsira kana pasina nguva yakakwana kana zviwanikwa.
Pazasi pane runyorwa rweyedzo automation maturusi uye masystem ekuyedza ReactJS application:
Kwayedza Zvekushandisa Zvishandiso zveReactJS
Nightwatch.js iri nyore kushandisa Node.js based End-to-End (E2E) yekuyedza mhinduro ye browser-based apps nemawebhusaiti. Inoshandisa vane simba W3C WebDriver API kuita mirairo uye zvirevo pazvinhu zveDOM.
Nightmare iri yepamusoro-chikamu browser otomatiki raibhurari kubva Chikamu .
Pasi pemabutiro, inoshandisa Erekitironi , iyo yakafanana ne PhantomJS asi zvakapetwa kaviri nekukurumidza uye zvakanyanya zvemazuva ano.
Niffy chishandiso chekuona chakasiyana chakavakirwa paNightmare. Iyo inokubatsira iwe kuona UI shanduko uye zviputi pane kuburitswa kwewebhu webhu yako.
Kufungidzira ndeyekuwedzera chrome yekuwedzera yakavakwa ne @ stevenmiller888 iyo inogadzira zvinyorwa zveNightmare zvako iwe paunenge uchitarisa.
Ipo Jest ichizivikanwa pakati pevagadziri veFacebook kunyora otomatiki bvunzo dzeReactJS kunyorera, ine dzimwe nyaya (kunonoka, kuseka kunovhiringidza). Mocha yave nzira inozivikanwa. Zvinonyanya kurwadza kumisikidza asi zvinogona kunge zvakakodzera kutarisa. Ini ndinotarisira kuti iwedzere kufarirwa mune ramangwana kunze kwekunge Jest ikunda dzimwe dzenyaya huru. Maona Kwayedza React Web Apps neMocha kutanga.
Zvekugamuchirwa kuyedzwa, unogona kufunga Mudziviriri. Icho chinonyanya chinhu cheAngular chishandiso chakavakirwa pamusoro peSelenium uye inouya neyakanaka API. Neraki, zvinokwanisika kumisikidza kuti ishande neReact. Chinhu cheNice nezve iyi nzira ndechekuti izvi zvinokutendera kuti uedze yako application uchipesana nemhando dzakasiyana dzemabhurawuza.
Enzyme + Mocha inoita kunge yakasarudzika musanganiswa kuyedza webhu kunyorera kwakanyorwa muReactJS. Izvo zviri nyore kudzidza, kunyangwe kune mumwe munhu mutsva kuReactJS uye Mocha anogona nyore kubata nematurusi aya munguva pfupi.
jbl chinongedzo 10/20
5G zvisungo cheat sheet: Verizon vs AT&T vs Sprint vs T-Mobile vs World
Samsung Galaxy S6 Edge vs Galaxy Note Edge: kutanga tarisa
Apple inoda kutengesa iyo iPhone ne iPad mukati me LG & apos; s Korean zvitoro
Iwe kangani iwe unokwidziridzira kune foni nyowani?
Yakanakisa Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G uye Cherechedzo 20 madhiri
Galaxy S7 uye S7 pamucheto mitengo, zvirongwa zvekubhadhara uye zvipo paVerizon, AT & T, T-Mobile uye Sprint